Korea ကားနှင့်ပတ်သတ်လာလျှင် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု များနှ... | CarsDB
Korea ကားနှင့်ပတ်သတ်လာလျှင် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု များနှင့် TAEYAN AUTO MOTORS
Taeyang Auto Motors သည် ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ Taeyang Euro International Co;Ltd မှရုံးခွဲအဖြစ်လာရောက် ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည့် အပြင် အရည်အသွေးအထူးစိတ်ချရသော ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ် ကားများကို သက်သာသော ဈေးနှုန်းများဖြင့် လက်လီ၊လက္ကား ရောင်းချပေးလျက် ရှိပါသည်။၎င်းအပြင် ဝယ်ယူပြီး (၃)လအတွင်း အင်ဂျင် ၊ ဂီယာဘောက်စသည်တ်ို့ကို ပစ္စည်းတန်ဖိုး အခမဲ့၊ ပြင်ဆင်ခ အခမဲ့ (လုံးဝအခမဲ့) ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ထို့အပြင် ၎င်းကာနှင့်ပတ်သတ်သော Spare Parts များကိုလည်း ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာများနှင့် အထူးဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိသည့် အပြင် ဝယ်ယူစဉ်ကာလမှ (၆) လအတွင်း ပြင်ဆင်စရိတ် (လက်ခ) အခမဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
Taeyang Auto Motor မှ ဝယ်ယူရရှိနိုင်သော ကားများမှာ-
KIA Bongo III 2004-2013
Hyundai Porter II 2004-2013
Grand Starex Limousine 2008-2013
Starex GRX 2004-2007
Country Minbus 2004-2013
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာကတော့ -No.(6/7), A1 Street, Mingalardon Industrial Zone, Near Aung Mingalar Highway Bus Complex, Mingalardon Township, Yangon.
Contact Ph- 09 32076971
Taeyang Auto Motors သညျ ကိုရီးယားနိုငျငံရှိ Taeyang Euro International Co;Ltd မှရုံးခှဲအဖွဈလာရောကျ ဖှငျ့လှဈထားခွငျးဖွဈပါသညျ့ အပွငျ အရညျအသှေးအထူးစိတျခရြသော ကိုရီးယားနိုငျငံထုတျ ကားမြားကို သကျသာသော စြေးနှုနျးမြားဖွငျ့ လကျလီ၊လက်ကား ရောငျးခပြေးလကျြ ရှိပါသညျ။၎င်းငျးအပွငျ ဝယျယူပွီး (၃)လအတှငျး အငျဂငျြ ၊ ဂီယာဘောကျစသညျတျို့ကို ပစ်စညျးတနျဖိုး အခမဲ့၊ ပွငျဆငျခ အခမဲ့ (လုံးဝအခမဲ့) ဝနျဆောငျမှုပေးပါသညျ။ထို့အပွငျ ၎င်းငျးကာနှငျ့ပတျသတျသော Spare Parts မြားကိုလညျး ကိုရီးယားနိုငျငံမှ တိုကျရိုကျတငျသှငျးပွီး ကိုရီးယားနိုငျငံမှ ကြှမျးကငျြအငျဂငျြနီယာမြားနှငျ့ အထူးဝနျဆောငျမှု ပေးလကျြရှိသညျ့ အပွငျ ဝယျယူစဉျကာလမှ (၆) လအတှငျး ပွငျဆငျစရိတျ (လကျခ) အခမဲ့ ဖွဈပါသညျ။
Taeyang Auto Motor မှ ဝယျယူရရှိနိုငျသော ကားမြားမှာ-
ဆကျသှယျရနျလိပျစာကတော့ -No.(6/7), A1 Street, Mingalardon Industrial Zone, Near Aung Mingalar Highway Bus Complex, Mingalardon Township, Yangon.
Posted at: 14-07-2014 14:56 PM